PM Draghi: Italy reopenings a result of vaccinations | Italy travel news
Vaovao momba ny dia any Eropa • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Vaovao momba ny dia any Italia • Other • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao mivalona
PM Draghi: Misokatra indray i Italia vokatry ny vaksiny
Misokatra indray i Italia
Home » Lahatsoratra » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Italia » PM Draghi: Misokatra indray i Italia vokatry ny vaksiny
Nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny praiminisitra Mario Draghi mba hanehoana ny didin'ny “Orinasa, Asa, Tanora ary Fahasalamana” ary hiadian-kevitra momba ny fisokafan'i Italia indray.
Ny minisitry ny toekarena sy ny vola any Italia, Daniele Franco, ary ny minisitry ny asa, Andrea Orlando, dia nanatrika ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ihany koa.
Hafa noho ny taloha io didim-panjakana io satria mijery ny ho avy hoy ny PM.
Tsy maintsy resintsika ny areti-mandringana hamelombelona ny toekarena izay nanindry ny praiminisitra Draghi.
“Ny fisokafana indray dia valin'ny vaksiny. Mandeha tsara ny lozisialy ary raha misy zavatra reharehako dia io no laharam-pahamehana omena ireo lohahevitra marefo indrindra. Roa volana lasa izay no sokajy kely indrindra fanaovana vaksiny 70 ka hatramin'ny 79 taona, ary nahatratra 80 isan-jato izany ankehitriny. ”
Nilaza izany ny praiminisitra Draghi nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety hanolorana ny didim-pitondrana Sostegno (fanampiana ara-bola), nankatoavin'ny filankevitry ny minisitra. Ity didim-panjakana ity, hoy izy nanamafy, dia "tsy mitovy amin'ny taloha satria mijery ny ho avy sy ny firenena misokatra io nefa tsy mamela olona any aoriana. Manampy sy manampy izy io. ”
Fijery ny ho avy amin'ny fahatokisana
"isika tsy maintsy mandresy ny areti-mandringana hamelomana indray ny toekarena. Ny fanampiana tsara indrindra dia ny fanokafana hetsika indray. Manantena izahay fa hisy fanatsarana sahady amin'ny telovolana manaraka. Na dia mbola aloha aza ny miresaka momba ny fitomboana maharitra - noho izany dia mila ny PNNR isika, ”hoy i Draghi. Izany no drafitra fanarenana izay nanamafisan'i Draghi fa "tsy nisy ny fihemorana ary nilaina ny fotoana nandaminana ny fahasarotany."